नसुनिएका आवाज Archives - Khasokhas Weekly
न्यूयोर्क मा नारी दिवस
ग़ैर आवसिय नेपाली संघ, राष्ट्रीय समन्वय परिषद अमेरिका न्यूयॉर्क च्याप्टर ले अंतराष्ट्रीय नारी दिवस भब्यरूप सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा प्रमुख अथिति नेपाली महाबाणिज्यदूत मधु मरासिनीले नेपाली महिलाहरूको अधिकार, नेपाल को संविधान मा प्राप्त भएको छ । अब सबै क्षेत्रमा महिलाका अधिकारहरू स्थापित गर्न का लागी,सम्पूर्ण सरोकारवाला क्षेत्रहरूबाट सहयोग को जरूरी भएको बताउनू भएको छ। …
वेदका पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, नासदीय सूक्त, शून्यको सिद्धान्त, शुल्बसूत्र नै आधुनिक विज्ञानको मूल स्रोत रहेकामा विद्वानहरुले जोड दिनुभएको छ । कुलचन्द्र–जनार्दन अध्ययन मण्डलले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा भाषाविज्ञानका प्रा डा लक्ष्मीप्रसाद खतिवडाले संस्कृत वाङ्मयका विज्ञानसम्बन्धी मूलभूत अवधारणालाई पश्चिमाले उपयोग गरेर आफ्नै नाम दिएको बताउनुभयो । “नेपाली संस्कृतिको ठूलो भाग संस्कृत वाङ्मयमा अडिएको छ, …
‘आफैले आफैलाई स्वीकार्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो’ – लेक्स लिम्बु
लण्डन निवासी २५ बर्षिय नेपाली मुलका चर्चित ब्लगर लेक्स लिम्बुले एउटा भिडियो सार्वजनिक गर्दै समलिंगी भएको खुलासा गरेका थिए । आफ्नो जीवन, परिवार र पहिचानका बारेमा मार्मिक भिडियो सार्वजनिक गर्दै उनले आफू समलिंगी भएको खुलासा गरेका हुन् । त्यसपछि उनले कस्तो प्रतिकृया पाइरहेका छन् ? के फरक अनुभव गरिरहेका छन् ? यसै सेरोफेरोमा खसोखाससँग लेक्स …
चर्चित ब्लगर लेक्स लिम्बुले गरे समलिंगी भएको खुलासा (मार्मिक भिडियो)
लण्डन निवासी २५ बर्षिय नेपाली मुलका चर्चित ब्लगर लेक्स लिम्बुले आफू समलिंगी भएको खुलासा गरेका छन् । आफ्नो जीवन, परिवार र पहिचानका बारेमा मार्मिक भिडियो सार्वजनिक गर्दै उनले आफू समलिंगी भएको खुलासा गरेका हुन् । बुबाआमालाई आफू समलिंगी भएको बताउँदा भएको कठिनायी र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने संघर्षबारे उनले भिडियोमा आफ्ना मनका कुराहरु बोलेका छन् । …
पुरुषबाट बलात्कृत हुने पुरुषलाई कानुनी सहायताको अभाव
महिला र बालबालिकाबिरुद्ध हुने यौन अपराधबारे धेरैले चासो र चर्चा गर्दै आएपनि पुरुषबाट पुरुषमाथि हुने बलात्कारका बारेमा भने कमै चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । सामान्यतया पुरुषहरु बलात्कृत हुन सक्दैनन् भन्ने आम धारणा रहेको पाइन्छ, जुन गलत हो । वास्तवमा पुरुषहरु पनि पुरुषबाट बलात्कृत हुने गरेका छन् । पुरुषहरु बलात्कृत भएका घटना समाचारमा त्यही आउदैनन् । …
समलिंगी नभएपनि मैले किन महिलासँगै जीवन बिताउने निधो गरेँ?
म र मेरी साथी समलिङ्गी होइनौँ अर्थात् हामी एकअर्काप्रति शारीरिक रूपमा आकर्षित छैनौँ। हामीबीचको आकर्षण आत्मक हो। यसकारण विगत करिब ४० वर्षदेखि हामीसँगै बस्दै आएका हौँ। अहिले हामी ७० वर्षका भयौँ। सँगै बस्ने निधो गर्ने बेला हामी करिब ३० वर्षका थियौँ। जवानीका बेला हामीलाई आत्मसन्तुष्टिको चाह थियो। मलाई पनि र उनलाई पनि। म र मेरी …
नेपालमै पहिलो समलिंगी विवाह (भिडियो)
समलिंगी विवाहको कानुन निर्माण भइरहेका बेला डडेल्धुरा जिल्लामा एक समलिंगी जोडीले विहे दर्ता गराएका छन्। जिल्लाको भित्रीमधेशका रुपमा चिनिने परशुराम नगरपालिकामा समलिंगी विहे दर्ता भएको हो। स्थानीय रमेश नाथले वैशाख २४ गते समाजिक परम्परा अनुसार कैलालीको लम्किीचुहा नगरपालिका १ की मोनिका शाहीसंग विवाह गरेका थिए। उनीहरुले परशुराम नगरपालिका पुगरे विहे दर्ता गराएका हुन्। समलिंगी विहे …
‘श्रीमान् हुँदा मात्र सबैले साथ दिने रै’छन् । श्रीमानले वास्ता गर्न छोड्यो, घरपरिवारले पनि निकालिदिए । अहिले सुर्खेतमा सानो नानी बोकेर आफन्तको शरणमा छु,’ बेलमती राना गीता थापा सुर्खेत । साटाखानीनिवासी वसन्ती चपाईले दुई वर्षअघि जुम्लाका एकजना दलित केटासँग विवाह गरिन् । अन्तरजातीय विवाह घरमा स्वीकार नगरिएपछि उनी श्रीमान्सहित सुर्खेत आइन् । दुई वर्षपछि उनका …
नेपालकी उदीयमान युवा गल्फर प्रतिमा शेर्पाले अमेरिकामा प्रशिक्षण लिने भएकी छिन् । प्रशिक्षणका दौरान प्रतिमाले गल्फ प्रतियोगितामा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन् । प्रशिक्षणका लागि प्रतिमा १८ असारमा अमेरिकातर्फ प्रस्थान गर्नेछिन् । प्रतिमासँगै प्रशिक्षक सचिन भण्डारी पनि अमेरिका जानेछन् । प्रतिमा तथा सचिनलाई दुईतर्फी टिकटको प्रायोजन कतार एयरवेजले गरेको छ । दुई टिकटको मूल्य ४ लाख रुपैयाँबराबरको …
हुम्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने जनप्रतिनिधिको प्रतिवद्धता
हुम्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै स्थानीय स्रोत साधनलाई प्राथमिकतामा राखेर हुम्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सिमिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदम लामाले स्थानीय साधन स्रोतको भरपुर उपयोग र शिक्षा–स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले भोकमरी र हिउँको विषयलाई भन्दा अन्य विषयलाई अगाडि ल्याउनु पर्ने धारणा …